ကလေးမလိုချင်လို့ ကိုယ်ဝန်ကို လက်သည်နဲ့ တုတ်ထိုးလိုက် နှိုက်လိုက် – WunYan
ကလေးမလိုချင်လို့ ကိုယ်ဝန်ကို လက်သည်နဲ့ တုတ်ထိုးလိုက် နှိုက်လိုက်
Posted on September 2, 2018 by whuk-46651
ဒက်ဖရင်မှာ EMO ဖြစ်တဲ့အခါ အမြင်ရဆုံး မမြင်ချင်ဆုံးက induced abortion တွေပဲ။ ယောကျာ်းခရီးသွားနေတုန်း ကိုယ်ဝန်ကို လက်သည်နဲ့ တုတ်ထိုးလိုက်နှိုက်လိုက် ဆေးသောက်လိုက်နဲ့ ၆ သိန်းဖိုး အကုန်ခံ ကြိုးကြိုးစားစား အကြိမ်ကြိမ် ဖျက်ချပြီးမှ pelvic abscess ဖြစ်ပြီး ရောက်ချလာတဲ့လူနာ ရှိတယ်။
ယောကျာ်းရှိ ကလေးရှိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ပျက်ရင်ပြီးရော ကိုယ်ပါသေလည်း မကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ လူနာမျိုး ရှိတယ်။ အသက်ကြီး ရောဂါအခံတွေရှိနေပြီး ဘာမှမကြောက် လက်သည်နဲ့ ဖျက်ချပြီး ရောက်လာတဲ့ လူနာတွေ ရှိတယ်။
ယောကျာ်းရှိရက်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိလာတော့ မလိုချင်လို့ တစ်ခါဖျက်ချပြီး သွေးဆင်းပြီး ဆေးရုံရောက်လာတယ်။USG ရိုက်တော့ မပျက်သေးဘူး ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ပြန်ပေးဆင်းလိုက်တယ်။ လက်သည်နဲ့ တုတ်သွားပြန်ထိုးပြီး ပြန်ရောက်လာတယ်။ အောက်က စမ်းကြည့်တော့ ပုံထဲက အတိုင်း အချင်းတန်းလန်းနဲ့ ကလေးလေး နဲ့ မရွေးရိုး ထွက်လာတာမျိုး ရင်ထဲမကောင်းစွာနဲ့ မြင်ဖူးတယ်။
-ချော်လဲလို့, ဆိုင်ကယ်တိုက်လို့, ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံနဲ့ လာတယ်။ ဖျက်ထားလား မေးရင် သမီး ဘာမှ မလုပ်ထားပါဘူးပဲ။ အောက်ကိုစမ်းလို့ နံယောင်နေမှ တုတ်ချောင်းစမ်းမိမှ ဟုတ်ပါတယ် လုပ်ထားပါတယ် ဘာညာ။ချော့တစ်ခါ ခြောက်တစ်လှည့် မေးရတယ်။လက်သည်မနိုင်တော့မှ လွှတ်လိုက်လို့ လာတဲ့လူတွေလည်း ရှိတယ် အမျိုးကိုစုံ။
ဖျက်နည်းမျိုးစုံ အသက်အရွယ်မျိုးစုံ ဖျက်ကြတယ်။ ရည်းစားနဲ့ living together နေလည်း ဖျက်။ ယောကျာ်းရှိလည်း ဖျက်။ ယောကျာ်းမသိအောင် ဖျက်။ ယောကျာ်းလည်းသိတယ် စိတ်ချမ်းသာရင် ပြီးရောဆိုပြီး အလိုတူအလိုပါ ဖျက်။ လမ်းဘေးက ခွေးလေး ကြောင်လေးတွေတောင် သနားတတ်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ကိုယ်လုပ်လို့ ရလာတဲ့ ကိုယ့်ဗိုက်ထဲက ကိုယ့်ကလေးကို မကြောက်မရွံ့ ဖျက်ချနေကြတဲ့ မိန်းမတွေ အတော်များများပဲ။ အံ့သြမိတာက living together unmarried လူတွေထက် အိမ်ထောင်ရှိပြီး ဖျက်တဲ့လူတွေ ပိုများနေတာပဲ။
ယောကျာ်းပဲယူချင်တယ် ကလေးမလိုချင်ဘူး။Okay တားဆေးသုံးလားဆိုတော့လည်း မသုံးဘူး။ ဘယ်လို နားလည်ရမလဲ မသိဘူး။ family planning ကို ခပ်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲ သဘောထားကြတယ် ထင်ပါရဲ့။ မသိနားမလည်တဲ့ အမိုက်အမဲလေးတွေလား?ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေးကို online က ရှာဝယ်တတ်တယ်။ သူများလက်တို့ပြီး မေးမြန်းဝယ်တတ်တယ်။ လက်သည်ဆီ သွားဖို့တတ်တယ်။
ကိုယ့်ဘာကိုယ် နှိုက်ပြီးထည့်တဲ့လူတောင် ရှိသေး။ အခြေအနေမဟန်တော့မှ ဆေးရုံကိုလာကြတာတွေကြီးပဲ။ ကိုယ့်ဇာတ်ကိုယ်မနိုင်တော့တဲ့အချိန် ဆေးရုံကိုလာလိုက်ရင် လုပ်စရာရှိတာ သူတို့ လုပ်ပေးမှာပဲဆိုပြီး လာတဲ့လူတွေ နေ့တိုင်းကို ရှိနေတာ။ ဘာတားဆေးတွေ ရှိလဲ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ စိတ်မဝင်စားဘူး။ သိလည်း မသိချင်ဘူး။ ကိုယ်ဝန်ရမှ မလိုချင်ရင် ဖျက်ချလိုက်မယ်။ ထမင်းစား ရေသောက်ပဲ။
Induced abortion isaChoice. ဘယ်လိုပဲ စဉ်းစားစဉ်းစား မလုပ်သင့်တဲ့ အရာပါ။မလုပ်ကြပါနဲ့။ ကလေးနဲ့အတူ အမေပါ သေသွားကြတာတွေ အများကြီးပါ။ ယောကျာ်း/မိန်းမ အတူနေချင်သလိုနေ စိတ်မဝင်စားပါ။ကလေးယူဖို့ အစီအစဉ်မရှိရင် ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကလေးမလိုချင်ရင် သေချာသုံးကြပါလို့ မိန်းမတွေကော ယောကျာ်းတွေပါ နားဝင်အောင် ပြောချင်တယ် တကယ်။
Su Myat Nway
အသိတရားလေးနဲ့ဆင်​ခြေ ကြစေဖို့ တင်​ပေးခြင်းပါ
ကလေးမလိုခငျြလို့ ကိုယျဝနျကို လကျသညျနဲ့ တုတျထိုးလိုကျ နှိုကျလိုကျ
ဒကျဖရငျမှာ EMO ဖွဈတဲ့အခါ အမွငျရဆုံး မမွငျခငျြဆုံးက induced abortion တှပေဲ။ ယောကျြားခရီးသှားနတေုနျး ကိုယျဝနျကို လကျသညျနဲ့ တုတျထိုးလိုကျနှိုကျလိုကျ ဆေးသောကျလိုကျနဲ့ ၆ သိနျးဖိုး အကုနျခံ ကွိုးကွိုးစားစား အကွိမျကွိမျ ဖကျြခပြွီးမှ pelvic abscess ဖွဈပွီး ရောကျခလြာတဲ့လူနာ ရှိတယျ။
ယောကျြားရှိ ကလေးရှိ တက်ကသိုလျကြောငျးသူ ဖွဈပွီး ကိုယျဝနျပကျြရငျပွီးရော ကိုယျပါသလေညျး မကွောကျဘူးဆိုတဲ့ လူနာမြိုး ရှိတယျ။ အသကျကွီး ရောဂါအခံတှရှေိနပွေီး ဘာမှမကွောကျ လကျသညျနဲ့ ဖကျြခပြွီး ရောကျလာတဲ့ လူနာတှေ ရှိတယျ။
ယောကျြားရှိရကျနဲ့ ကိုယျဝနျရှိလာတော့ မလိုခငျြလို့ တဈခါဖကျြခပြွီး သှေးဆငျးပွီး ဆေးရုံရောကျလာတယျ။USG ရိုကျတော့ မပကျြသေးဘူး ကောငျးတယျဆိုပွီး ပွနျပေးဆငျးလိုကျတယျ။ လကျသညျနဲ့ တုတျသှားပွနျထိုးပွီး ပွနျရောကျလာတယျ။ အောကျက စမျးကွညျ့တော့ ပုံထဲက အတိုငျး အခငျြးတနျးလနျးနဲ့ ကလေးလေး နဲ့ မရှေးရိုး ထှကျလာတာမြိုး ရငျထဲမကောငျးစှာနဲ့ မွငျဖူးတယျ။
-ခြျောလဲလို့, ဆိုငျကယျတိုကျလို့, ခေါငျးစဉျမြိုးစုံနဲ့ လာတယျ။ ဖကျြထားလား မေးရငျ သမီး ဘာမှ မလုပျထားပါဘူးပဲ။ အောကျကိုစမျးလို့ နံယောငျနမှေ တုတျခြောငျးစမျးမိမှ ဟုတျပါတယျ လုပျထားပါတယျ ဘာညာ။ခြော့တဈခါ ခွောကျတဈလှညျ့ မေးရတယျ။လကျသညျမနိုငျတော့မှ လှတျလိုကျလို့ လာတဲ့လူတှလေညျး ရှိတယျ အမြိုးကိုစုံ။
ဖကျြနညျးမြိုးစုံ အသကျအရှယျမြိုးစုံ ဖကျြကွတယျ။ ရညျးစားနဲ့ living together နလေညျး ဖကျြ။ ယောကျြားရှိလညျး ဖကျြ။ ယောကျြားမသိအောငျ ဖကျြ။ ယောကျြားလညျးသိတယျ စိတျခမျြးသာရငျ ပွီးရောဆိုပွီး အလိုတူအလိုပါ ဖကျြ။ လမျးဘေးက ခှေးလေး ကွောငျလေးတှတေောငျ သနားတတျတဲ့ခတျေကွီးမှာ ကိုယျလုပျလို့ ရလာတဲ့ ကိုယျ့ဗိုကျထဲက ကိုယျ့ကလေးကို မကွောကျမရှံ့ ဖကျြခနြကွေတဲ့ မိနျးမတှေ အတျောမြားမြားပဲ။ အံ့သွမိတာက living together unmarried လူတှထေကျ အိမျထောငျရှိပွီး ဖကျြတဲ့လူတှေ ပိုမြားနတောပဲ။
ယောကျြားပဲယူခငျြတယျ ကလေးမလိုခငျြဘူး။Okay တားဆေးသုံးလားဆိုတော့လညျး မသုံးဘူး။ ဘယျလို နားလညျရမလဲ မသိဘူး။ family planning ကို ခပျပေါ့ပေါ့တနျတနျပဲ သဘောထားကွတယျ ထငျပါရဲ့။ မသိနားမလညျတဲ့ အမိုကျအမဲလေးတှလေား?ကိုယျဝနျဖကျြဆေးကို online က ရှာဝယျတတျတယျ။ သူမြားလကျတို့ပွီး မေးမွနျးဝယျတတျတယျ။ လကျသညျဆီ သှားဖို့တတျတယျ။
ကိုယျ့ဘာကိုယျ နှိုကျပွီးထညျ့တဲ့လူတောငျ ရှိသေး။ အခွအေနမေဟနျတော့မှ ဆေးရုံကိုလာကွတာတှကွေီးပဲ။ ကိုယျ့ဇာတျကိုယျမနိုငျတော့တဲ့အခြိနျ ဆေးရုံကိုလာလိုကျရငျ လုပျစရာရှိတာ သူတို့ လုပျပေးမှာပဲဆိုပွီး လာတဲ့လူတှေ နတေို့ငျးကို ရှိနတော။ ဘာတားဆေးတှေ ရှိလဲ ဘယျလိုသုံးရမလဲ စိတျမဝငျစားဘူး။ သိလညျး မသိခငျြဘူး။ ကိုယျဝနျရမှ မလိုခငျြရငျ ဖကျြခလြိုကျမယျ။ ထမငျးစား ရသေောကျပဲ။
Induced abortion isaChoice. ဘယျလိုပဲ စဉျးစားစဉျးစား မလုပျသငျ့တဲ့ အရာပါ။မလုပျကွပါနဲ့။ ကလေးနဲ့အတူ အမပေါ သသှေားကွတာတှေ အမြားကွီးပါ။ ယောကျြား/မိနျးမ အတူနခေငျြသလိုနေ စိတျမဝငျစားပါ။ကလေးယူဖို့ အစီအစဉျမရှိရငျ ကိုယျဝနျတားဆေးတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ ကလေးမလိုခငျြရငျ သခြောသုံးကွပါလို့ မိနျးမတှကေော ယောကျြားတှပေါ နားဝငျအောငျ ပွောခငျြတယျ တကယျ။
အသိတရားလေးနဲ့ ဆငျခွေ ကွစဖေို့တငျပေးခွငျးပါ